Mareykanka iyo Qulqulka Muhaajiriinta
Xoghayaha Amniga Qaranka ee Mareykanka Jeh Johnson ayaa sheegay inuu ka fiirsanayo qaadista talaabo kasta oo sharciga ku saleysan oo lagula tacaalayo qulqulka balaaran ee muhaajiriinta sharcidarada ee ka imanaya Latin America ee soo galaya Mareykanka.
Johnson waxaa uu aqalka congress-ka u sharaxay talaabooyinka wasaaraddiisa qaadeyso ee ku aaddan xal u helista dhibaatada taagan.
Talaabooyinkaasi ayaa waxaa ka mid ah in lacag dheeri ah la geliyo sidii gacanta loogu dhigi lahaa dadka ka ganacsada dhoofinta sharcidarada ee dadka, isla markaana la burburiyo shabakadaha ay leeyihiin.
Mr Johnson ayaa sidoo kale sheegay in maamulka Madaxweyne Obama uu barnaamijyo wacyogelin ah ka bilaabey dalalka El Salvador, Guatemala, iyo Honduras.
Waxaa uu sheegay in barnamaijyadaasi loogu digayo qoysaska khatarta ay leedahay carruurta ay keligood u soo fasaxayaan inay soo aadaan Mareykanka, iyo weliba in laga wacyigelinayo xogta aan saxda ahayn ee laga faafinayo xeerarka socdaalka ee Mareykanka.
In ka badan 52,000 muhaajiriin carruur ah oo ka yimid Latin America ayaa si sharcidarro ah ku soo galey Mareykanka sannadkan.
Shan iyo toddobaatan boqolkiiba oo carruurtaasi ka mid ah ayaa ka timid dalalka El Salvador, Guatemala, iyo Honduras.